सुष्मा थलिएपछि रेजिना ! ~ The Nepal Romania
चलचित्र 'धर्मा'को आइटम गीत 'मान्दैन…मान्दैन' यतिबेला निकै कर्णप्रिय छ । हिरोइन रेजिनाको उत्तेजक डान्स हेरेर फिदा हुनेहरु पनि छन् । उक्त आइटम नम्बरमा रेजिनाको नृत्य त छँदैछ गीतले मात्र रिलिज अगावै फिल्मलाई चिनाएको पनि छ । तर उक्त आइटम गीतमा अर्की हिरोइन सुष्मा कार्कीले डान्स गर्ने निश्चित थियो । यसका लागि सुष्मा तयार पनि थिइन् ।
तर भैदियो अर्कै । सुटिङ सुरु हुनेबेला सुष्मा टाइफाइडले थलिएपछि उनको ठाउँमा रेजिनालाई ल्याउन निर्माणपक्ष बाध्य भयो । सुटिङलाई रोक्न नमिल्ने भएपछि निर्माणपक्षले हतार-हतार सुष्माको विकल्पमा रेजिनालाई अघि सारे । 'सुष्माजी विरामी हुनुभएपछि रेजिना बहिनीलाई ल्याएका हौं' निर्मात्री डा. दुर्गा पोखरेलले भनिन् 'नभए सुष्माजीले आइटम नाच्ने निधो थियो ।'अर्कोतर्फ फिल्मको उक्त गीतमा कोरियोग्राफर रिनशा राई पनि रिप्लेस भइन् । सुटिङ सुरु हुने बेला रिनशा अर्को प्रोजेक्ट 'ब्याच नम्बर १६'मा व्यस्त भएपछि निर्माताले हतार-हतार अर्को कोरियोग्राफर खोज्नुपर्‍यो । अन्ततः रिनशाको स्थानमा कृष्ण अछामीले आइटम डान्स नचाए । जे होस् दुईलाई दुईजनाले रिप्लेस गरेपछि मात्र गीत तयार भयो । दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित यो चलचित्र यो तिहारमा रिलिज हुँदैछ ।